सात दिने लकडाउनलाई ७ फिल्म– ४- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
चैत्र १४, २०७६ यज्ञश
काठमाडौँ — लकडाउनको आज चौथो दिन । घर वरपर भँगेराको चिरबिर र भुरभुर अझै स्पष्ट सुन्न थालिएको छ ।
म्यासेन्जरका भिडियो च्याटमा साथीहरुका तिलचामले दाह्री झुस्स देखिन थालेका छन् । कहीँ जानु छैन, त्यसैले दाह्रीसँग पनि कुनै बैर छैन ! कुनै मिटिङ भए, कसैलाई भेट्नु पर्ने भए पो चिटिक्क पर्नु !
कोरोनाको मार संसारभरी महामारी बनिसकेको छ । पछिल्लो दुई दिनमा नेपालमा नयाँ संक्रमित नदेखिए पनि डरको घन्टी भने बजिरहेको छ । यस्तो लाग्छ, झम्टा हान्ने पर्खाइमा कुनै जंगली जनावर वरपर घुमिरहेको छ !
विज्ञान भन्छ– जबसम्म प्रमाणित हुँदैन तबसम्म सबै सत्य फगत कल्पना हुन् । कुरो यहींबाट सुरु हुन्छ, सत्य र कल्पनाको द्वन्द्वबाट । कुन कुरा कहाँसम्म सत्य हो, कहाँदेखि कल्पना हो भन्नेमा संसारका धेरै द्वन्द्व अडेका छन् । मार्क्सवादी भन्छन्– ‘पुँजीवादले केही मुट्ठीभर मानिसको मात्र भलो गर्छ । यसलाई ढालेर साम्यवादमा पुगेपछि सबै बराबर, सबै सुखी हुनेछन् ।’ पुँजीवादीहरु भन्छन्– 'साम्यवाद एउटा कल्पनामात्रै हो ।' यदि त्यो कल्पनामात्रै हो भने के संसारका यत्रा धेरै कम्युनिस्टहरुले एउटा कोरा कल्पनाका लागि ज्यान दिए त ?
फेरि पुँजीवादी भन्छन्– 'पुँजीको विकास भएपछि यो अलिअलि खस्दै चुहिँदै भए पनि गरिबसम्म पनि पुग्छ ।' भरिएको प्याला छचल्किएजस्तो ! यो पनि एउटा कल्पनै सावित भइरहेको छ । तर, यही कल्पनाको आधारमा संसारका धेरै देशमा यो शासन शैली टिकिरहेको छ, जमिरहेको छ ।
यसैले सत्यकै सत्यता जाँच्नुपर्ने कुरा साहित्यकार, लेखकहरु उठाउँछन् । सत्य होइन, कसको सत्य ? भन्ने प्रश्न अहं रुपमा उठ्ने गर्छ ।
जस्तो, लकडाउनभरी आफ्नै घरभित्र बसेर जे छ त्यही पकाएर खान्छु भन्नु मध्यम वर्गको आम मानिसका लागि सत्य होला । तर, निम्‍न वर्गको कुनै घरै नभएको वा घरभित्र खानेकुरा नभएको मानिसका लागि त यो कल्पना न हुन्छ ।
सत्यको कुरा आज यति धेरै किन गरेको भने आज सिफारिस गर्ने फिल्मको विषय नै यही हो– सत्य के हो ? के सत्यको कुनै रुप वा आकार हुन्छ ? कसैले वर्षौं तपस्या गरेर कुनै दिन सत्यको दर्शन पायो भने त्यो कस्तो देखिएला ? बुद्धले ज्ञान पाएका थिए कि सत्यसँग साक्षात्कार गरेका थिए ? त्यसो भए के ज्ञान नै सत्य हो त ?
आँखों देखी (२०१४, भारत)
जुन दिन मानिस संसारका सारा बोझ र पीरतापबाट मुक्त होला । वा, सबैप्रकारका भयको बन्धनबाट मुक्त होला, त्यस दिन के मान्छे चरा होला ? के पंख फिंजाइ मानिस आकाशमा उड्ला ? मानिसलाई पृथ्वीको गुरुत्वले धरतीमा अड्याएको हो कि जीवनमा सहस्र बोझहरुले तानिएर मानिस उड्न नसकेको हो ?
‘आँखों देखी’का बाबुजी आफूलाई चरा जसरी उडिरहेको देख्छन् । यो कथा एउटा सपनाबाट सपनासरी सुरु हुन्छ । पुरानो दिल्लीको फटेहाल बस्ती । सगोलमा बसिरहेका दाजुभाइका दुई परिवार । छुट्टिन खोजिरहेकी भाइबुहारी । असमञ्जसमा परेको भाइ । प्रेम गर्न थालेकी छोरी । गृहणी आमा । जागिरे बाबु । स्कुल जानै मन नगर्ने किशोर । र, छोरीको हरिकंगाल टाइपको प्रेमी ।
यो समान्य परिवारमा एक दिन भुइँचालो आउँछ, जब छोरीको प्रेमकथा उजागर हुन्छ । यही कथासँगै बाबुको जीवनमा परिवर्तन आउन थाल्छन् । उनलाई विस्तारै लाग्छ, जे चिज मैले सत्य भनेर मानिरहेको छु ती त सत्यका नाममा केही समाजले थोपरेका कुरामात्रै रहेछन् । म त अरु नै कसैको सत्यलाई आफ्नो ठानेर बोकेर हिँडिरहेको रहेछु ।
उनले घोषणा गर्छन्– म आइन्दा आफैंले देखेको वा महसुस गरेको कुराबाहेक अरुलाई सत्य मान्न इन्‍कार गर्छु ।
फिल्मको चुरो यही हो- कि तपाईं आफ्नो सत्यको निर्माण आफैं गर्ने कि अर्काले बनाइदिएको सत्यको चप्पल पड्काउँदै हिँड्ने ?
फिल्मले प्रश्न उठाउँछ । यसैले सान्दिर्भक छ । फिल्मले समाज, हाम्रा आस्था र तर्कको शक्ति कुनै चिजलाई पनि छोड्दैन ।
एउटा विन्दुमा आएपछि राजेश बाबुजी भगवानलाई मान्न छोड्छन् । भन्छन्– मैले देखेको छैन, त्यसैले यो मेरो सत्य होइन ।
तर्क गर्नेहरुको भनाइ छ, भगवान मानिसले आफ्ना लागि गरेको सबभन्दा ठूलो आविस्कार हो । र, सामाजिक संरचनालाई नमान्नेहरु भन्छन्– समाज भन्नु नै एउटा कल्पना हो । समाज, सरकार, शासन, सत्ता र शक्ति भनेका मानिसका केवल कल्पना हुन् । होइन भने ढुंगा देखिने तर भगवान नदेखिने किन हुन्छ ? यस्ता प्रश्न गर्नेहरुका लागि त यो फिल्म काइदाको खुराक हुनसक्छ ।
संजय मिश्रा र रजत कपुर बलिउडले लामो समय दरकिनार गरेका प्रतीभा हुन् । तर, जब उनीहरुले ‘फँस गए ओबामा’ र ‘आँखो देखी’ बनाए, चमकधमकको महाराजा फिल्मफेयर पनि उनीहरुलाई अवार्ड दिन बाध्य भयो । मणि कौल र कुमार साहनीका शिष्य रजत कपुर निर्देशकमात्र होइन, कलाकारका रुपमा पनि उत्तिकै उम्दा छन् । चाहे त्यो ‘भेजा फ्राइ’ होस् वा ‘कपुर एन्ड सन्स’ ।
संजय मिश्रा त अहिलेका स्टार भइहाले । उनलाई स्टार बनाउने पनि यही ‘आँखों देखी’ हो । रोहित शेट्टीका फिल्ममा ‘जस्ट चिल...’ भनिरहेका संजयलाई रजतले बाबुजी बनाइदिए । त्यसयता 'मसान' हुन् वा 'न्युटन' संजय मिश्रा बलिउडमा छाए । संजय मिश्राको अभिनयले पनि तपाईंको मनलाई शान्त बनाउने छ ।
खाली समय छ, सोच्ने फुर्सद छ । यस्तो समयका लागि केही सोच्ने बनाउने फिल्म ठीक हुनेछ ।
वैकल्पिक फिल्म– इजाजत (१९८७)
वैकल्पिक फिल्मका रुपमा यसपटक धेरै विकल्प थिए । उडान, रेनकोट, मसान, सुपर डिलक्स । अलि पुरानामा जाने हो भने पार, मासुम, जाने भी दो यारों । प्रशस्तै । तर, अचानक मेरो स्मृति आयो– गुलजारको ‘इजाजत’ । नसिरुद्धिन शाह र रेखा । प्रेम, प्रतीक्षा र संगीतको यो त्रिवेणी रेलवे प्लेटफर्ममा सुरु हुन्छ र रेलझैं घुमेर तपाईंलाई जीवनको चक्करमा लैजान्छ ।
प्रकाशित : चैत्र १४, २०७६ १८:५२
चैत्र १३, २०७६ यज्ञश
काठमाडौँ — लकडाउनको तेस्रो दिन । देशभरीबाट आज आएका समाचारहरुमा खासै हलचल छैन । सीमा बन्द भएकाले भागदौड पनि छैन ।
काखमा स-साना बच्चा च्यापेर हतास मुद्रामा बसिरहेका महिलाहरु आजका तस्बिरमा देखिएका छैनन् । हिजोसम्म यस्ता फोटोहरु अनलाइनहरुमा आइरहेका थिए ।
कतै पुग्ने अनिश्चय, कतै के हुने हो भन्ने अनिश्चिता र व्यग्र प्रतीक्षा । समय बल्छीमा अड्किएको माछाजस्तो भएको छ । कतिखेर कसले बल्छी तान्ने हो र कसको फुर्लुङमा पुगेर अन्त्य हुने हो जस्तो ।
काठमाडौं सहर मौन छ । लाग्छ, सहर साधनामा छ । हरेक सहरको आफ्नो मौलिक रंग र आवाज हुन्छ भन्छन् । काठमाडाैंको रंग गेरुवा हो भनेर केही वर्षअघि मसँगको अन्तर्वार्तामा प्रसिद्ध चित्रकार लक्ष्मण श्रेष्ठले भनेका थिए । पशुपतिदेखि स्वयम्भूसम्मलाई हेर्दा उनको भनाइ सत्य लाग्छ । भिक्षुको गाउनदेखि घरमा पोत्ने माटो र इँटाले रंग पनि त्यस्तै छन् ।
अनि आवाज नि ? काठमान्डुको स्वर के हो ? अध्यात्मले के भन्छ थाहा छैन । दैनिक जीवनको हिसाबले हेर्ने हो भने काठमाडाैंका मुख्य दुई आवाज छन्– एउटा, गाडीको । र, अर्को सटरको ।
कवि विप्लव प्रतीक भन्छन्– यदि काठमाडौंमा भएका सबै सटर एकैपटक खोल्ने र बन्द गर्ने हो भने पृथ्वीमा भुइँचालो आउनेछ । कोरोना–कहरले काठमाडौंको यो आवाज बन्द गरिदिएको छ ।
यसका साथै एउटा डरले भने घन्टी बजाइरहेको छ । संसारभर फैलिएको यो महामारीसँग जुध्न सबभन्दा ठूलो आवश्यकता देखिएको छ, मानिसहरुको धैर्य । मन स्थीर र धीर हुनका लागि शान्ति चाहिन्छ ।
लकडाउनको तेस्रो दिन मैले सिफारिस गर्न लागेको फिल्म त्यसमा सहायक हुनसक्छ । ७ दिनमा सात एसियाली फिल्मका ७ फिल्मको यो तेस्रो श्रृंखलामा पालो आएको छ, कोरियाको ।
स्प्रिङ, समर, फल, विन्टर ...एन्ड स्प्रिङ (२००३, कोरिया)
भनिन्छ, सबभन्दा ठूलो कोलाहल मान्छेको मनमा हुन्छ । जसलाई कसैले सुन्न सक्दैन । जसले त्यसलाई सुन्न सक्छ र बुझ्न सक्छ, त्यो साधु वा सिद्ध हुन्छ ।
सिनेमाले मानिसलाई जीवनमा यस्ता कुराहरुको अनुभवहरु गर्ने मौका दिन्छ, जुन वास्तविक जीवनमा सम्‍भव छैन । तपाईं अन्तरिक्षमा नगइकन ‘ग्रयाभिटी’मा त्यसको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ । एक हजार वर्षअघि पृथ्वीमा मानिसको जीवन कस्तो थियो भन्ने ‘१०००० बीसी’मा देख्न सक्नुहुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्ध कति भयानक थियो भन्ने जान्नलाई त सयौं फिल्म छन् ।
किम कि दुक नामक प्रख्यात कोरियाली निर्देशक ‘स्प्रिङ, समर, फल, विन्टर ... एन्ड स्प्रिङ’ले चाहिँ तपाईंलाई आफ्नो मनभित्र हेर्न सिकाउँछ ।
यो कथा हो, एउटा गुम्बा (मोनेस्ट्री)को । जंगलको बीचमा, तालको माझमा छ एउटा गुम्बा । यहाँ बाँचिरहेका छन्, दुई जीव । एउटा गुरु, अर्को चेला ।
सानैमा परिवारले ल्याएर छोडेको (एक किसिमको परित्यक्त) चेलाको जीवनका पाँच चरणलाई निर्देशकले समयका पाँच चक्रका रुपमा पेस गरेका छन् । यी हरेक चक्रको कथा झन्डै १० वर्षजतिको अन्तरालका छन् ।
सुरुको भागमा निकै कलिलो बालक छ । उसका बालसुलभ चञ्चलता छन् । त्यसपछिको भागमा केटो किशोर छ । उमेरको अर्को खुड्किलोमा पुग्दा स्त्री संसर्गको कथा यसमा छ । तेस्रो भागको कथा युवकको हो । युवकका रीस, आवेग, सफलता र असफलताका कुरा छन् । चौथो भागमा आइपुग्दा त्यो बालक एक समझदार, संसारलाई अर्कै नजरले हेर्ने मानिस भइसकेको छ । जो, आफ्नो जीवनलाई फर्केर हेर्न सक्छ र आफ्ना गल्तीहरु खुट्याउन सक्छ । फिल्मको अन्तिम भागमा नयाँ शिष्यको प्रवेश हुन्छ । यो भागले तपाईंको कमलो मनलाई पगाल्दिन सक्छ ।
फिल्ममा बुद्धलाई एउटा बिम्बका रुपमा प्रयोग गरिएको छ । बौद्ध दर्शनलाई पनि यसले कतै छुन्छ । तर, यसलाई निर्देशकको जीवनप्रतिको आफ्नो बुझाइका रुपमा नै बुझ्नु उचित हुन्छ ।
‘स्प्रिङ, समर...’ खासमा लेखेर बताउने भन्दा पनि हेरेर महसुस गर्ने फिल्म हो । यसले तपाईंलाई हरेक पटक सोच्ने ठाउँ दिन्छ । सास फेर्ने ठाउँ दिन्छ । यसैले म यसका बारे धेरै कुरा लेख्दिनँ, दुइटा कुरामात्रै थप्छु ।
पहिलो- फिल्मको पहिलो भागमा एउटा प्रसंग छ । यसमा छन्- माछा, भ्यागुता र सर्प। जीवनको गम्भीर दर्शनको दृश्यमा कसरी वर्णन गर्ने भन्नेमा यो जत्तिको राम्रो दृश्य मैले कुनै देखेको छैन ।
दोस्रो- मानिसको परिवपक्वता भनेको आफ्ना गल्ती आफैंले देख्न सक्ने स्थितिमा पुग्नु हो । यसको उमेरसँग खासै साइनो छैन । फिल्मको चौथो भागमा कथा जब पश्चातापमा पुग्छ, तब तपाईंलाई आफ्नो जीवन फर्किएर हेर्न मन लाग्नसक्छ ।
किम कि दुक कोरियाका नामी निर्देशक हुन् । उनले बनाएका ‘टाइम’, ‘ब्रेथ’, ‘थ्री आइरन’, 'पियता', ‘ब्याड गाइ’जस्ता थुप्रै फिल्म चर्चित फिल्म छन् । साथमा एउटा अर्को कुरा पनि थपिदिउँ । निकै सुन्दर सिनेमा बनाउने यी निर्देशकलाई २०१७ मा एक अभिनेत्रीले शारीरिक हिंसाको आरोप लगाइन् । यो उनको करिअरको एउटा धब्बाको रुपमा रहेको छ ।
वैकल्पिक फिल्म - ओक्जा (२०१७)
यस वर्ष ‘प्यारासाइट’बाट ओस्कर र कान्स जितेपछि बोङ जोन हु सबैले चिन्ने निर्देशक बनेका छन् । ‘प्यारसाइट’बारे चर्चा पनि निकै धेरै भइसकेको छ । यसैले मैले यहाँ विकल्पका रुपमा हुकै २०१७ को फिल्म ‘ओक्जा’ प्रस्तुत गरेको छु ।
यो नेटफ्लिक्स फिल्मले तपाईंलाई यथार्थ, भविष्य र कल्पनाको फ्युजनवाला दुनियाँमा पुर्‍याउने छ । मानिसहरुले भोगिरहेको समस्या र प्रविधिलाई नै सबैथोक ठानेर चल्दा प्रकृतिमाथि हुने अन्यायको कथा यसले सुनाउने छ ।
प्रकाशित : चैत्र १३, २०७६ १८:५८